Xisbiga Faroole oo laga diiday Qardho iyo Rabshado rasaas la isu adeegsaday • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xisbiga Faroole oo laga diiday Qardho iyo Rabshado rasaas la isu adeegsaday
Xisbiga Faroole oo laga diiday Qardho iyo Rabshado rasaas la isu adeegsaday
May 28, 2013 - By: Khalid Yusuf
Rabshadan ayaa ka bilaabatay xaflad uu ururka Horsed soo qaban qaabiyey oo lagu dhigay mid kamid ah Hotelada magaalada Qardho, xafladaasi ayaa waxaa soo abaabulay xubno ka socday dowlada Puntland oo uu ugu horeeyo Wasiirka deegaanka ee Puntland Cabdiqani Yusuf Cadde, Guddoomiyaha Gobalka Karkaar, Duqa magaalada Qardho iyo xubno kale oo kamid ah ciidamada dowlada Puntland.
Xafladan ayaa waxaa ka dhashay rabshado xoogleh, kadib markii ay goobtaasi weerar ku qaadeen dhalinyaro kasoo horjeeda in xisbiga Madaxweyne Faroole uu wax xaflad ah ku dhigto magaalada Qardho, horey ayey shacabka magaalada Qardho u horjoogsadeen in xisbigaasi xafiis ka furto magaalada Qardho.
Ciidamo illaalo u ahaa Wasiirka iyo xubnihii la socday ayaa rasaas xoogan ku riday dadkii mudaharaadka u tagay xafladaasi, arrintan ayaa keentay in iyaguna hub ay soo qaataan dadkii mudaharaadayey oo markii danbe iyaguna rasaas ku riday ciidamadii illaalada u ahaa mas’uuliyiinta dowlada ka tirsan.
Arrintan ayaa waxaa soo dhexgalay cuqaasha magaalada Qardho iyo nabadoonada oo markii danbe ku guuleystay inay kala diraan labada dhinac, iyadoo wafdigii ka yimid magaalada Garowe ay halkasi dib ugu noqdeen.
Maaha markii ugu horeysay oo arrimaha Doorashooyinka ay keenaan rabshado rasaas la isu adeegsado, waana markii labaad oo ay shacabka hub u qaataan ciidamada, horey ayaa guddiga Doorashada ee Puntland rasaas lala beegsaday xili ay sanadkii hore booqasho ku tageen degmada Rako Raaxo ee gobalka Karkaar.
Hase yeeshee inta badan ciidamada ayaa adeegsada rasaas ay ridaan xiliyada ay dhacayaan mudaharaadyada ay dhigaan dadka shacabka ah oo hada bilaabay inay iyaguna hubkooda qaataan xiliyada mudaharaadka arrintaasi oo ay nabadoonada ku tilmaameen mid amniga wax weyn u dhimi kara.
Mid kamid ah dadkii shalay ka qeyb qaatay mudaharaadkii ka dhacay Qardho oo Horseed Media u waramay ayaa sheegay in mudaharaadka uu ahaa mid nabadoon oo ay ku muujinayeen in aan wax xaflad ah lagu dhigi karin magaalada.
“…Shacabka wey diidan yihiin dad danbiilayaal ah oo magacyo xilal wata inay magaalada la yimaadaan wax aan magaalada iyo shacabkeedaba aysan dooneyn….fikirkaas baanu u wadnay markii rasaas nalaku riday oo ay naftayada halis gashay…arrintan ayey dhalinyarada ka caroodeen taasina baa keentay in shacabka iyaguna hubkooda soo qaataan maadaama ciidamadii dowlada u dhaqmayaan sidii maleeshiyaad kooxeed…” ayuu yiri Siciid Aadan oo kamid ah dhalinyarada magaalada ee shalay mudaharaadayey.
Xaalada magaalada Qardho ayaa degen, shaqaaqadii shalay ayaa kusoo beegmaysa labo maalmood kadib markii ay Nabadoonada gobalada Bari iyo Karkaar ay kulan weyn oo ay Qardho ku yeesheen ay ugu baaqeen dowlada in la isugu yimaado shirweyne lagu badbaadinayo Puntland.
Inta badan degmooyinka Puntland ayaa laga diiday in xisbiyada looga dhawaaqay Puntland ay xafiisyo ka furtaan waxaa sidoo kale laga diiday booqashadii ay ku tagi lahaayeen guddiga doorashada, xili doorashada golayaasha deegaanka dib loo dhigay markii sadexaad.
Shacabka ayaa intooda badan sheegay inay diyaar u yihiin in Xisbiyo la furto balse kasoo horjeeda qaabka loo maareeyey iyagoo ku tilmaamay guddiga doorashada Mid hoos taga Madaxtooyada, isla markaana xisbiyada hada looga dhawaaqay Puntland ay yihiin kuwo ay dowlada sameysay intooda badan. Dadkan ayaa ku eedaynaya dowlada inay wakhtiga dhumisay oo ay si bareer ah xiligii awooda ay heysay u fulin weyday qodobadii ugu muhiimsanaa ee doorashada oo ay ku jiraan Tirakoobka, Diiwaangelinta dadka codeenaya, Xadeynta xuduudaha degmooyinka, hubka dhigista, Xoriyada Saxaafada iyo qodobo kale oo saldhig u ah doorasho xalaal ah oo dalka ka dhacda.
Dowlada Puntland iyo Guddiga Doorashada ayaa iyagu dhankooda sheegay in doorashada ay qaban doonaan 15ka Luulyo (July) iyadoo doorashadan noqon doonto mid lagu geli doono hab diiwaangal aan lahayn, isla markaana aan weli la aqoon degmooyinka ay doorashadu ka dhici doonto oo aan weli la shaacin.